ကျွန်ုပ်တို့၏သမိုင်း - Shenzhen Unistone Packaging Co. , LTD
အားလပ်ရက်လက်ဆောင် Box ကို
Round Gift Gift Box
ပတ်ပတ်လည်လက်ဝတ်ရတနာ Box ကို
နေအိမ် > ကျွန်ုပ်တို့၏သမိုင်း
Shenzhen Unistone Packaging ကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Shenzhen ရှိ Longgang ခရိုင်တွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းချမှုကိုပေါင်းစပ်ထားသောထုပ်ပိုးသည့်ကုမ္ပဏီများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ထုတ်ကုန်များတွင်မျက်မှန်၊ လက်ဝတ်ရတနာများ၊ နာရီများနှင့်အလှကုန်များထုပ်ပိုးခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ထုပ်ပိုးရန်ဆက်စပ်ထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာများအပြည့်အစုံရှိသည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးသဘောသဘာဝနှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန်များသည်စက္ကူမျက်မှန်သေတ္တာများနှင့်သွပ်ပြားစက္ကူဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သော်လည်းဖောက်သည်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောစျေးကွက်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ဖြစ်သည်။ လက်ဆောင်သေတ္တာများ၊ လက်ကိုင်အိတ်များ၊ သားရေဘူး (PVC, PU)၊ သံဖြူသေတ္တာ၊ ပျော့သားရေလက်သေတ္တာစသည်ဖြင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်ထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်သည်။
"ဖောက်သည်များ၏ယုံကြည်မှုနှင့်မျက်မှန်စက်ရုံ၏နံပါတ်တစ်ဖြစ်ခြင်း" သည်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေရှည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသင်နှင့်အတူတည်ဆောက်ပြီးသင့်အားကောင်းမွန်သောနောက်အရောင်း ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းကိုပေးနိုင်သည်ဟုစိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်မျှော်လင့်ပါသည်။
စီးပွားရေးရည်ရွယ်ချက်များ - "အကျိုးရှိရှိရိုးသားပြီးအရည်အသွေးမြင့်ထုပ်ပိုးပေးသွင်းသူများ"!
စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်: "တန်းတူညီမျှမှုနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးကျေးဇူး၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂုဏ်သိက္ခာ"!
၀ န်ဆောင်မှုမစ်ရှင် -“ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးပြီးပြည့်စုံသော ၀ န်ဆောင်မှု။ သုံးစွဲသူဝယ်လိုအားကို ဦး တည်သည်။
 အမှတ် ၃၀၂၈ Derong အဆောက်အအုံ၊ Longgang လမ်း ၇၀၉၈၊ Henggang လမ်း၊ Longgang ခရိုင်၊ Shenzhen, China
မူပိုင်ခွင့်© 2021 Shenzhen Unistone Packaging Co. , LTD - မျက်မှန်သေတ္တာ၊ အားလပ်ရက်လက်ဆောင်သေတ္တာ၊ နာရီသေတ္တာများ - All Right Reserved